ပြင်ရမယ်ထင်တာလေးတွေ တွေ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ ပြောသွားချင်ပါတယ်။ --Mmthinker ၀၈:၃၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)
အခု သမိုင်းဆိုင်ရာေတွကို တင်နေပါတယ်။ မူလ စာစီ စာရိုက်ပြီး စုဆောင်းသူ ကိုလဂွန်းအိန်နဲ့ သဘောတူညီမှုယူပြီး တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလဂွန်းအိန်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ --Mmthinker ၀၅:၄၆၊ ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)
ဗဟို မျက်နှာစာမှ အမှားများပြင်ဆင်
အတ္ထုပတ္ထိ မဟုတ်ပါ။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ သာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး တဝမ်းပူတွင် တဝမ်းပူပင် ဆင့်ရပါမည်။ --Mmthinker ၁၁:၁၀၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)
Navigation တွင် ရေးထားသော လှူဒါန်းမှုကလည်း မှားနေပါသည်။ လှုဒါန်းမှု ဖြစ်နေပါသည်။ ပြင်ပါရန်။ --Mmthinker ၁၁:၁၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)
မည်သည့်စာမျက်နှာများမှညွန်းထားသည်မှ ညွန်းကို ညွှန်းဟု ပြင်ရန်။ ဆက်ဆပ်သော အပြောင်းအလဲများတွင် ဆက်စပ်ဟု ပြင်ရန်။ --Mmthinker ၁၁:၁၆၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ (UTC)
အတွင်းဖက် မျက်နှာစာမှ အမှားများပြင်ဆင်
တွေ့မိသလောက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ redirect လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါကြောင်း။ --Mmthinker ၀၅:၄၂၊ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
Request for Help, pleaseပြင်ဆင်
Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 ၂၁:၁၆၊ ၁ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
--Mmthinker ၀၃:၂၁၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
Thankyou very muchပြင်ဆင်
Yours Sincerely, From --Jose77 ၀၈:၁၀၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
polish the main pageပြင်ဆင်
There are some blank 'entries' with red color at front page, So I try to fill all of those, but not so complete ones. Please help by contribute to those entries to be helpful. မျက်နှာစာမှာ အရောင်နီနေတဲ့ ပုဒ်လွတ်တွေကို လိုက်ဖြည့်နေတယ်။ တချို့လည်း မြန်မာ ဘာသာစကား သဘောသဘာဝအရ ကြံဖန် ဖြည့်ရတာပါပဲ။ အဆင့်သင့်သလို ဖြည့်သွင်းကြပါကုန်။ mm thinker ၁၃:၂၂၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)
Wiki Sysop requestပြင်ဆင်
Please make an official request to becomeasysop on metawiki page. The link is here. . Please makeareference to your local sysop request page when you submit sysop request on metawiki. You can look at the example page for Hintha here. . Good Luck. --Zawthet ၁၇:၂၂၊ ၁၁ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
Thank for your guide KZH. But I really poor in technical knowledge. I eager to write and edit posts. I go and check those pages and drunk without drink. I will check it again. :) --Mmthinker ၁၂:၄၄၊ ၁၃ မတ် ၂၀၀၉ (UTC)
မီတာဝီကီမှာ လျှောက်လိုက်ပါပြီ။  --Mmthinker ၀၇:၄၁၊ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
Ko Thinker, can you please translate local Adminship request to English? Steward need to review it and I am sure that he won't understand Burmese. hehe. :D --Zawthet ၀၈:၄၆၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
ဟေ့လူကြီး ..ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်း..။ စာလည်း ဝင်မရေးတော့ပါလားဗျ..။ --လဂွန်းအိန် ၁၂:၅၉၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၀၉ (UTC)
ရေးပါတယ်။ နားနားပြီးတော့ပေါ့။ --Mmthinker ၁၀:၂၃၊ ၂ မေ ၂၀၀၉ (UTC)
Hi သင်ကာ! Would you be so kind to translate part of this article into the wonderful Burmese language? It's listed as one of the articles every Wikipedia should have. Please. 3-4 lines would be enough. Thank you very much. --Mer De Glace ၁၀:၀၃၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
Dear Glace. There isatranslation of Sir Isaac Newton in my.wiki. But still need to add more. Pls check here  --Mmthinker ၀၇:၄၅၊ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
Are you fun17092008 in YouTube?--125.25.229.192 ၀၇:၁၈၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ (UTC)
Moving page to your user pageပြင်ဆင်
ကိုသင်ကာ။ ကျွန်တော် ကိုသင်ကာရဲ့ ဝီကီစာမျက်နှာကို ယူစာ စာမျက်နှာနဲ့ Talk Page ကို ြပန်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ Wikipedia Notablity Guideline နဲ့ Conflict of Interest ကြောင့်ပါ။ တခြားယူဆာတွေ သူတို့နာမည်နဲ့ သူတို့ ပေ့ချ်တွေ လုပ်ကြတာ၊ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွက် ပေ့ချ်တွေ လုပ်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ လက်မခံဘဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းကျမှ မျက်စိမှိတ်နေတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် မကောင်းဘူး ထင်လို့ပါ။ ကိုသင်ကာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Zawthet ၁၇:၂၂၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ (UTC)
ရပါတယ် ကိုဇော်သက်၊ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပါ ရွှေ့ပါဗျာ။ အဆင်ပြေကြဖို့ပဲ အရေးကြီးပါကြောင်း mm thinker ၁၀:၃၆၊ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ (UTC)
Hello Burmese Wikipedian! Could you translate Call of Duty: Black Ops II, Selena Gomez, Demi Lovato, Katy Perry, and Thai National Anthem into the wonderful Burmese language? If you have much time, please translate them as you can. --Reform (talk) ၀၈:၀၇၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၂ (UTC)
Article translation/collaboration requestပြင်ဆင်
Would you be interested in sucha"trade"? Do let me know, either by responding here, or on my talk page, or by emailing me. Cheers, Russavia (talk) ၁၀:၄၆၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ (UTC)
Hello. I found that you are the most active administrator. (There are now only3admins on this project.) Category:Deleteme is piled up. Please clear them. --Octahedron80 (talk) ၀၉:၁၆၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၅ (UTC)
Could I request Wikipedia:Myanmarsar Help & Wikipedia:Font to be semi-locked? Because those pages have been vandalised from IPs foralong time. --Octahedron80 (talk) ၀၁:၁၀၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၅ (UTC)
ကျော်ကျော်အောင် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၁၈၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
Done. Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၃၄၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
အိုးဝေဘလော့ဂ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၅၈၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ (UTC)
ဗုဒ္ဓ FM အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၉:၂၂၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ (UTC)
ဘုံဘေ အိန္ဒိယ နည်းပညာတက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၂၇၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
ဖူဒန် တက္ကသိုလ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၃၆၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
Your advanced permissions on my.wikipediaပြင်ဆင်
Yours faithfully. --علاء (ဆွေးနွေး) ၁၈:၂၃၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)
၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။